Sunday January 10, 2021 - 12:09:39 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wakaaladda baadigoobka iyo badbaada dowladda Indonesia ayaa sheegtay in ay heshay jir bani'aadam iyo qaar kamid ah dharkii ay xirnaayeen dadkii la socday diyaaraddii burburtay shalay gelinkii dambe xilli ay dul haadaysay jaziiradda Jaawa.
Diyaaradda oo nuuceedu ahaa Boeing 500-737 ayaa maalintii sabtida ku dhacday biyaha jaziiradda Jaawah balse faah faahin intaas ka baxsan lagama hayo oo waxaa lala'yahay dhammaan meydadka dadkii la socday.
Saraakiisha gurmadka degdegga ah waxay usheegeen warbaahinta in waxyar oo kamid ah qalfoofka diyaaradda ay ka heleen badda gunteeda walina ay socdaan howllaha gurmadka.
Diyaaradda burburtay ayaa aroortii hore ee maalintii sabtiga ka kicitintay garoonka magaalada Jakaarta balse daqiiqado kadib markii ay hawada gashay ayay dhacday.
Wasiirka gaadiidka Indonesia ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada baadigoobka ay xadideen illaa laba goobood oo lafilayo in uu ku dhacay Sanduuqa Madoow ee diyaaradda kaasi oo laga heli doono macluumaadka kama dambaysta ah ee ku saabsan sababta keenta in diyaaraddu dhacdo.
Diyaaradda dhacday waxaa la socday 65 qof oo kala ahaa 53 qof rakaab ah iyo 12 qof oo ahaa shaqaalaha diyaaradda oo uu ku jiro duuliyaha.
shirkadda Sriwijaya Air oo ay udiiwaangashaneed diyaaradda burburtay ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay ka walaacsantahay rakaabka iyo shaqaalaha diyaaradda saarnaa waxayna sheegtay in diyaaraddu ay kusii jeedday gobolka Kalimantaana ee dhaca galbeedka Indonesia.
Wadanka Indonesia ayaa ah dalka ugu shilalka badan caalamka waxaana sanad walba shilal diyaaradeed ugu dhinta kumanaan kun oo ruux